ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး: အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့တွင် ဒေါက်တာဘွဲ့ယူစဉ်
အားထုတ်မှုကင်းရလျှင်းချမ်းသာ ထိုနေရာများရှိငြားမှန်စွာ သင်ကိုယ်တိုင်လည်းထိုပဲသွားပါ ငါ့ကိုလဲထိုပဲပို့ပေးပါ (သုသိမသုတ်)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့တွင် ဒေါက်တာဘွဲ့ယူစဉ်
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 3:30 AM
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိကြသော ရဟန်းရှင်လူအပေါင်း ဘေးရန်ကြောင့်ကြ ဆင်းရဲကင်း၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျမ္မာချမ်းသာကြပါစေ လို့ ဆန္ဒပြု မေတ္တာပို့သလျှက်ပါ။ ဘလော့ ရောက်လာ များသူငါ ချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲကြပါစေ..လို့လဲ..မေတ္တာပို့သနေလျှက်ပါ..ဆိုတာ
ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ မေတ္တာငတ်မွတ်တာထက် ပိုဆိုးတဲ့ရောဂါမရှိဘူး. မိမိပတ်ဝန်းကျဉ်အပေါ် မေတ္တာ.ကရုဏာ.မုဒိတာ ပွားနိုင်ကြပါစေ။
သတင်းမီဒီယာများ အရှင်မေတ္တာစာရ Ashin Mettacara.Com Ashin Mettacara.OrgBurma Lawyers' Council DVB BBCBurmese RFA VOA YAMC Mizzima ယနေ့ မြန်မာ ရိုးမ ၃ သစ္စာ ဟစ်တိုင် ဧရာဝတီ
ရွှေရှိတယ်ပြောပြော ငွေရှိတယ်ပြောပြော ပစ္စုပ္ပန်မှာ အေးချမ်းတည်ငြိမ် ရင့်ကျက်စွာနဲ့ မနေတတ်ဘူးဆိုရင် လူ့ဘ၀ဟာ ဘာမှကိုအဓိပ္ပါယ်မရှိပါ။
နို့ဟာခွန်အားကိုဖြစ်စေတယ်လို့ နားလည်ရုံနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာမှာခွန်အားတွေ ဖြစ်မလာပါဘူး။ ခွန်အားဖြစ်လာဘို့အတွက် နို့ကိုသောက်မှဖြစ်မယ်လေ တတ်သိပညာနဲ့လုပ်ကိုင်မှုဆိုတာလည်း ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်ရပါမယ်.။ (ဦးပဂျီငို)
အသိဥာဏ်နည်းပါးတရားဝေးလံ သူတို့သည် ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုတောင့်တပြီး ဖန်ဆင်းရှင်ထံသွား၍ တောင့်တနေကြသည်။ဗြဟ္မာ သိကြားနတ်များကို အားထားနေကြသည်။အဆောင်ကောင်း လက်ဖွဲ့ကောင်းများကို အားကိုးကြသည်။နာမည်ကြီး သူထံသွားရောက်ပြီးသိဒ္ဓိတင်ကြသည်။ သူတို့၏အကြောင်းတရားများကား လောဘတဏှာအရင်းခံပြီး အချောင်ရလိုခြင်းစသောညစ်နွမ်းသော စေတနာများကဦးဆောင် နေရကားမြတ်သောအကျိုး တရားများကိုလက်ခံရရှိလိမ်မည် မဟုတ်ပေ။ မိမိ၏စင်ကြယ်ကောင်းမြတ်သော ကောင်းကျိုးချမ်းသာများပြည့်စုံုံုံပြီးစီးချင်ပါလျှင်စင်ကြယ်ကောင်းမြတ် သောအကြောင်းတရားများကို ဖန်တီးရမည်ဖြစ်ပေသည်။ (ဆရာတော်ဦးဝါသေဌ)
မဟုတ်မခံစိတ်တွင် မဟုတ် ဟုငြင်းခုံခြင်းနှင့် မခံ ဟူ၍တုံ့ပြန်လိုခြင်းနှစ်ရပ် ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်။ ဤတွင် မဟုတ်ရင်မခံဘူး ဟူသည် ဒေါသစိတ်ဖြစ်၍ မဟုတ်ရင်မခံရဘူးဟူသည်ကား သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်း မေတ္တာစိတ်ဖြစ်၏။ လူသားအချင်းချင်း မေတ္တာထား၍ ရန်ကင်းကြပါစေ..လို့
စိတ်နှလုံးမြင့်မြတ်လျှင်ဘ၀လည်းမြင့်မြတ်၏။ စိတ်နှလုံးသန့်စင်လျှင် ဘ၀လည်းသန့်စင်၏။ စိတ်နှလုံးအေးချမ်းလျှင် ဘ၀လည်းအေးချမ်း၏။ စိတ်နှလုံးသိမ့်မွေ့လျှင် ဘ၀လည်းသိမ်မွေ့၏။ စိတ်နှလုံးလှပလျှင်ဘ၀လည်းလှပ၏
လူသားတိုင်းဘုရားရှိခိုးပြီးလျှင် ဟိုဘက်မှာ ဘီလူးရော နတ်ရော(၃၇)မင်းရော အကုန်ကုန်းပြီးတော့ ရှိခိုးနေတာတွေ့ရတယ်။ အဲဒီလိုဆိုတော့လဲဘုရား လည်းရှိခိုးတယ်။ ဟိုဘက်မှာလည်းရှိခိုးတယ်။ ဘုရားနဲ့သာသနာပသတ္တ၀ါတွေကို တန်းတူထားလျှင် ဘုရားတန်ခိုးကျသွားမယ်။ အဲဒါကိုမသိကြတော့ ကိုယ့်သရဏဂုံကိုကိုယ်နှိမ့်ချသလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဒါ့ကြောင့်အာဠာဝကရဲ့ (ဘုရားမှတပါးတခြားကိုမကိုးကွယ်တဲ့) စိတ်ထားမျိုးမွေးဖို့လိုတယ်လို့ တိုက်တွန်းပရစေ။ (သီတဂူဆရာတော်)
မပြီးဆုံးသေးသော ခရီးကို ဖြတ်သန်းရင်း ဘ၀အတွက်ရုန်းကန်နေတဲ့ အခက်ခဲဆိုတဲ့ မှတ်တိုင်ကို လျှောက်လှမ်းရင်းနဲ့ ပြီးဆုံးနိုင်တဲ့အထိ လျှောက်လှမ်းမယ်ဆိုတာ
target="_blank">ကျော်ဝင်း - စိန်ခေါ်ကြသူများ(06/28)
အသိပညာ ဆည်းပူးရာ လမ်းခရီးသည် ဆုံးသည်မရှိ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုအာရုံပြုပြီး အမြဲတမ်းမေတ္တာနဲ့နေရင် သာမန်လူတွေထက် ကံ နဲ့အရှိန်ဝါမြင့်တယ် ဒါ့ကြောင့်မေတ္တာနဲ့ အမြဲနေကြပါ။ (အရှင်ဇနကဘိဝံသ)
စာလာဖတ်ရင်းနဲ့ အမှတ်တရတခု ကျန်သွားစေချင်မိသည်။
လမ်းတော့လမ်းပဲ ဒါပေမဲ့.. ပြောင်းပြန် လျှောက်နေရင်တော့ ပန်းတိုင်နဲ့ဝေးသည်ထက် ဝေးနေအုံးမှာပဲ.. တနေ့တလံ ပုဂံဘယ်ပြေးဆိုပေမဲ့ ပုဂံနဲ့ပြောင်းပြန်လျှောက်နေရင်တော့ ပုဂံနဲ့ဝေးသည်ထက် ဝေးနေသလိုပေါ့..
အမေလို့ ခေါ်လိုက်ပါ တကယ်လို့ ခေါ်ခွင့်မရရင် အနည်းဆုံးပေါ့ အမေ့အကြောင်းကို တွေးတော စဉ်းစားပြီးနေပါ။ CALL YOUR MOTHER. IF CAN'T AT LEAST THINK OF HER. (ကျောင်းသားလေး)
သူများမျက်ရည်နှင့် ခြေမဆေးချင်ပါနဲ့ သူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမှ ရရှိမည့်ချမ်းသာသုခကို လိုခြင်သောသူသည် ရန်သူနှင့်ဆက်ဆံနေရသကဲ့သို့ ရန်ဘေးမှမလွတ်နိုင်ပါ။ (ဓမ္မပဒ)
အမှတ်တရ ခြေရာလေး ချန်ထားခဲ့ပါ
<!-weather in varanasi, india on your site - html code - weatherforecastmap.com -- >
ကိုယ်မရောက်နိုင်တဲ့နေရာ စာရောက်နိုင်တယ်..။ ကိုယ်မပြောနိုင်တဲ့စကား စာပြောနိုင်တယ်..။ ကိုယ်သိတဲ့အသိ ကိုယ်မြင်တဲ့အမြင် ကိုယ်ထင်တဲ့အတွေး စာတိုစာစလေးတွေနဲ့ ရေးပြခွင့်ရလိုက်တော့ ရင်ထဲခံစား ပီတိလေးများတောင် ဖြစ်မိပါရဲ့လား...
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဗျာဒိတ်တော်ခံယူသည်မှအစ တရားအလုံးစုံကို အကုန်အစင် သိတော်မူသော အတုမရှိ သဗ္ဗညုဘုရားအဖြစ်...
ဗုဒ္ဓကို လိုက်တုသော ဂျိန်း
ဂျိန်းဘာသာနှင့် ပက်သက်သော အချက်အလက်များကို အရင်ပို့စ် ဒီနေရာ တွင် ဖော်ပြထားပါသည်၊ ယင်းဘာသာ အကြောင်းကို အရင်လေ့လာထားပြီးမှ ဤ...
အိန္ဒိယပြည် နှင့် မူဆလင်ဘာသာ (သို့မဟုတ်) ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရသော ဗုဒ္ဓ ၏ သမိုင်းအမွေအနှစ်များ
ခရစ်နှစ် ၅၇၀ မတိုင်မီက အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်း၌ တည်ရှိသည့် အာရပ်နိုင်ငံမှာ ၊ ယခုအခါကဲ့သို့ "အစ္စလာမ်" ဘာသာမထွန်းကားခဲ့သေးချေ။ ထိုနု...
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗာရာဏသီရွှေမြို့တော်မှ ကာလကတ္တားသို့ ရထားဖြင့်သွားလာခဲ့ရသည်။ ရထားဆိုက်သည်နှင့် ကာလကတ္တားလေဆိပ်နှင့် နီးရာဟိုတည်တခုသို့ တညတာတည...
သမီးမိုက်လေးမိတင်မြ ခုတော့ မြေခသွားပြီပေါ့..
စာရှု့သူများကို ညောင်လေးပင်မြို့ ရွာလယ်ရွာမှ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ မတင်မြရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို တင်ပြပါဦးမယ်။ ရွာလယ်ရွာသည် ညောင်လေးပင်မြို့နယ်...
G mail တွင် attachment နဲ့မဟုတ်ဘဲ ပုံပို့ နည်း
mail မှာ attachment ဖိုင်နဲ့ ပုံတွေတွဲ ပို့တာကို အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ.. အခု ကျွန်တော်ပြောချင်တာက attach ဖိုင်မဟုတ်ဘဲ text box ထဲမှာ ပုံကို...
အောင်တော်မူခဲ့သည့် အောင်ခြင်း (၈)ပါး
မာရံ ယက္ခံ ဂဇံ စောရံ၊ စိဉ္စမာနဉ္စ သစ္စကံ။ နာဂံ ဗြဟ္မံ ဇိနော ဇယံ၊ ဟောတု မေ ဇယမင်္ဂလံ။ ယောဇိနော=အကြင်ငါးမာရ်ပယ်ဘိ ဂုဏ်သတ...
သူတို့အယူအဆကတော့ jina ဇိန ဘုရားဟုကြွေးကြော်ကာ ကျင်လည်ခဲ့ကြသည်။ Jina ပုဒ်မှ မြန်မာမူအရ ဂျိန်းဟုဖြစ်လာသည်။ အောက်ပါ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးအား မချစ်သော...
နေပြည်တော်ရှိ တောတွင်းတစ်နေရာတွင် ဆံတော် ရှင်ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားနှင့်ပုံစံတူသော ထူးခြား အံ့ဘွယ် ကျောက်တုံးကြီး သတင်းမှာ ရန်ကုန်မြို့ပေ...
ဗုဒ္ဒဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့သည် ၀ါဆိုလရောက်လေတိုင်းဝါဆိုသင်္ကန်းကို သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အား လှူဒါန်းဆက်ကပ်ကြသည်မှာ အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းသော...
ဘွဲ့ လက်မှတ်သွားယူရန် ဟိုတည်မှမထွက်ခင်အမှတ်တရ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့တွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးကိုယ...
ရှာ၍ တွေ့ပြီ အလင်းသစ်ရောင်ခြည်
ဖုန်း နှင့် Tablet တွေမှာ ရုပ်ရှင်ဗွီဒီယိုများကြည့်ရန်နှင့် သီချင်းတွေနားထောင်းရန် - MX Player 1.10.35 APK
Cydia app မသုံးဘဲ icon Rename ပြောင်းကြမယ် ( Offline )
အမှန်အကန် ကျွန်တော့် စေတနာ
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးမှာ တိုးတက်နေတယ်ဆိုတော့ အများကသဘောကျသလိုပဲ တိုးတက်တယ်ဆိုပေမဲ့ အ၀တ်အစားအနေအထိုင် အသုံးအဆောင်တွေမှာ တိုးတက်နေတာပါ သူတော်ကောင်းတရားကျတော့ မတိုးတက်ပါဘူး..။ ဒီတိုးတက်မှုတွေဟာ ကြာရှည်လဲမခံပါဘူး ယ္ခုလို.ရုပ်ဝတ္ထုတဘက်ထည်း တိုးတက်နေပြီးတော့ အကျင့်စာရိတ္တဆိုတဲ့ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုမပါလျှင် ဘယ်လောက်ချမ်းသာချမ်းသာ စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာ မရနိုင်ပါဘူး.။ (အရှင်ဇနကဘိဝံသ)
Gmail. Gtalk မှတ်စု
International Social Network Myanmar
ပန်းဆိုတာ ခေါင်းမှာပန်သော်လည်း ပန်သူလှစေဘို့ ဘုရားမှာလှူသော်လည်း လှူသူ ဆုတောင်းပြည့်စေဘို့ အဖြည့်ခံသက်သက်ပါ..
ဘ၀ဆိုတာ နေတတ်ရမယ်. Awesome Inc. theme. Theme images by johnwoodcock. Powered by Blogger.